Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo dowladda isku soo dhiibay – Xorriya Online
Sarkaal ka tirsanaa Al-Shabaab oo dowladda isku soo dhiibay
Sarkaal ka tirsanaa kooxda mintidiinta ah ee Al-Sahabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada Dowladda iyo kuwa Nabad ilaalinta ee AMISOM.
Dowladda Soomaaliya ayaa degmada Qoryooleey ee Gobolka Shabeellaha Hoose kusoo bandhigtay Sarkaal ay sheegtay in uu Al-Shabaab u qaabilsanaa Aagga degmadaasi Qoryooleey, kaas oo isku soo dhiibay Ciidamada Dowladda.
Sida la sheegay sarkaalkaan isa soo dhiibay ayaa waxaa degmada Qoryooleey kusoo dhaweeyay taliyaha Ciidamadda madaniga ah ee degmada qoryooley Col- Cali Waal iyo Taliyaha Ciidamadda AMISOM.
Marar badan oo hore ayey ciidamada Dowladdu soo bandhigeen saraakiil ay ku sheegeen in ay muhiim ahaayeen balse lagala kulmay dhibaato ay kamid tahay is qarxin iyo in ay xog siiyaan kooxda oo markii horeba aysan kasoo goosan balse shaqo usoo aaday iyo in ay xog bixiyaan.
Inta badan ciidamada Dowladda iyagoo aan ku sameyn dhaqan celin, islamarkaana aan ku bixin dadaal dheer oo lagu xaqiijinayo sheegashadoodii hore ee soo goosashada ayey howl galiyaan.
Mararka qaar waxaa dhacda in laga dhigo dhar-cad, kaddibna ay la shaqeeyaan saraakiisha sare ee dhar-cadka ah kuwaasoo ugu dambeyn isku daya in ay khaarajiyaan sidii hadda kahor ka dhacday Agagaarka Daalo ee jidka Soddonka, halkaasoo nin soo goostay uu isku qarxiyay taliyihii ciidamada dhar-cadka ee aagga Daalo.
Taliyaha Ciidamadda degmada Qoryooley Korneyl Cali Waaal ayaa ugu baaqay dhalinyaradda hadda ku jirta Al-Shabaab ee ka barbar dagaalama in ay isa soo dhiibaan si aysan u dhibateen dadkooda iyo dalkooda loona fudinaayo cafis.
Sidoo kale Taliyaha waxaa uu sheegay in amniga Degmada Qoryooley uu yahay mid wanaagsan, isla markaana Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay sameeyaan howlgallo looga hortagayo weerarada Al-Shabaab.
Si kastaba, Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Al-Shabaab ayaa degaannada ay maamulaan waxaa ay siyaabo kala duwan ugu soo bandhigaan Saraakiil iyo Ciidamo uu midba midka kale sheego in uu isku soo dhiibay.